Kulankii Baarlamaanka Soomaaliya Oo Kusoo Dhamaaday Buuq Iyo Jahwareer | Himilo Media Group
Kulankii Baarlamaanka Soomaaliya Oo Kusoo Dhamaaday Buuq Iyo Jahwareer
Muqdisho, 07 Apr, 2019 (Himilo)-Fadhigii Baarlamaanka Dalkaasi Soomaaliya ayaa buuq iyo jahawareer ku dhammaaday shalay, isla markaana waxa guud ahaan aan suurto galin goluhu fadhiisto oo ay mudanayaashu kaga hadlaan xaaladda amniga dalka Soomaaliya.
Fadhigan Golaha baarlamaanka ayaa hadheeyay buuq iyo sawaxan horseeday in kulanka lasoo xidho, kaasoo ka dhashay markii lasoo jeediyay in saxafadda bannaanka looga saaro gudaha baarlamaanka maadaama laga arrinsanayo arrin xasaasi ah.
Khilaafka ayaa soo ifbaxay markii guddoonka baarlamaanka uu soo jeediyay codsi ah in warbaahinta laga saaro kalfadhiga isla markaasna ay xildhibaanada ay diideen tallaabadaasi, sida uu BBC u sheegay xildhibaan Cabdiraxiin Macalin
“Shacabka Soomaaliyeed xaq ayay u leeyihiin inay ogadaan dalka waxa ka socda, inay ogaadaan xukuumaddiisa shaqada ay heyso, marka taas ayaan u aragnay inay ku tahay khalad baarlamaankii iyo madax bannaanidiisii iyo shaqaddiisii”.
Tallaabada warbaahinta looga saarayo baarlamaanka waa inay ka timaadda codsi ay xildhibaanada soo jeediyaan.
“Xeer hoosaadka waxaa ku qoran, soo jeedinta waa inay xildhibaanada ka timaaddaa, guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddoomiye ku-xigeenka intuba xildhibaanada ayay ka mid yihiin…xaq ayaa loo leeyahay in cod la geliyo oo loo codeeyo, haddii codka laga helo bannaanka loo saaro”. Ayuu yidhi Xildhibaanka Cabdiraxiin Macalin
Xaalada Amniga ee magaalada Muqdisho iyo gobollada ku xeeran ayaa sii xumaanayay dhawrkii bilood ee ugu dambeeyay iyadoo Kooxda Al-Shabaab ay kordhisay weerarada ay ka fulinayso magaalada Caasimada ah iyo gobollada Shabeelooyinka.